Hitan’ny Mpikatroka ny Mahareniranontay Ny Reniranon’i St. Petersburg · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2014 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny русский, srpski, Español, 日本語, English
Roa herinandro lasa izay, nanatontosa fitsapana tao Novoye Devyatkino, zana-tanàna miala 20 kilaometatra ny tanàndehibe, tamin'ny rafi-panadiovana [tatatra] ao an-toerana ny vondrona mpiaro tontolo iainana iray ao St-Petersburg. Tamin'ny fikarohana nomen'izy ireo anarana hoe “Zotran-Diky” ry zareo no nandatsaka fitaovana sivy nohakelezina ho fanarahana amin'ny alalan'ny GPS sy tsy mety lenan'ny rano ao anaty tranom-pivoahan'ny fonenana iray ary nanomboka nandrakitra an-tsarintany ny marika nizoran'ireo fitaovana. Nilaza ireo mpitandro ny tontolo iainana tao amin'ny tranonkalan'izy ireo fa niraraka mivantana avy tao an-trano ka nanaraka ny lalandrano azo izoran-dakana an-kalamanjakana, tsy mba nisedra akory ny bitika indrindra amin'ny fanivanan'ny tatitra fanarian-drano ireo fitaovana naraha-maso. Hatrao Novoye Devyatkino, dimy amin'ireo fitaovana no nahatratra ny rano midadasiky ny helodranon'i Neva, izay toerana nahafatesan'ireo vatoaratra tamin'ny fitaovana.
Na dia izany aza, dia mbola misy ny fanontaniana nivoaka momba ilay fanandramana. Tamin'ny 29 Oktobra, namoaka lahatsary manazava ny fikarohana nataony ireo mpitandro ny tontolo iainana, lahatsary ahitana vehivavy milaza fa Evgenia Dolgova no anarany. Ao amin'ny lahatsary, mampiseho zavatra bitika toy ny gaoma i Dolgova raha nanazava ny fampiasana ireo fitaovana hanarahana amin'ny alalan'ny GPS (jereo ny sary eto ambany). Mampiseho sary vitsy misy ireo karazana fanarahamaso amin'ny GPS karazany roa tsy mety lenan'ny rano ny lahatsary: ireo no TKSTAR LK109 sy Twin Mask MT-90.